Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo gaaray 116 iyo tirada maanta la diiwaan-geliyey | Xaysimo
Home War Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo gaaray 116 iyo tirada maanta la diiwaan-geliyey
Kiisaska Coronavirus ee Soomaaliya oo gaaray 116 iyo tirada maanta la diiwaan-geliyey
Tirada dadka qaba cudurka Coronavirus ee Soomaaliya ayaa dhaaftay 100, kadib markii dad hore leh cudurka maanta laga helay, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 36 qof oo hor leh laga helay cudurka maanta, taasi oo ah tiradii ugu badneyd ee la diiwaan-geliyo muddo 24 saac gudaheed ah.
36-ka qof ayaa ka mid ahaa 47 qof oo cudurka laga baaray, waxaana arrin cabsi muujinaysa ah, in 47 qof oo la baaray kaliya laga waayey 11 ka mid ah, oo 36 laga helay.
Dadkan ayaa 27 ka mid ah waxay yihiin rag, halkan 9 ay yihiin haween, sida warbixinta lagu sheegay. Tiradan ayaa ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyey ee cudurka Coronavirus 116 qof.
Bukaanada cudurka maanta laga helay ayaa 30 kamid ah waxay da’doodu u dhaxaysaa 20 ilaa 39 sano (83%), halka 5 ka mid ahna ay da’doodu u dhaxysaa 40 ilaa 59 sano (14%). Kaliya hal qof ayaa wuxuu ka weyn yahay 60 sano.
Sida ay ku talisay wasaaradda caafimaadka, si aad naftaada, midda qoyskaaga iyo tan bulshada-ba u badbaadiso, ku dadaala fara-dhaqasho joogto ah idinkoo isticmaalayo biyo iyo saabuun muddo ugu yaraan 20 il-biriqsi ah.
Fiiro gaar ah: Waxaan warbixintan ka reebnay hal kiis oo dhimasho oo cusub oo aan kasoo xiganay bogga wasaaradda caafimaadka, balse ay dib uga saareen, mana naqaan sababta. Tirada dhimashada ilaa hadda waa 5 qof oo horey loo ogaa.